Fibatana fonjamby- Afrika :: Niravona ny olana ara-bolan’ny Federasiona • AoRaha
Fibatana fonjamby- Afrika Niravona ny olana ara-bolan’ny Federasiona
Nivaly ny fitarainana. Vola mitentina 180 tapitrisa ariary no voarain’ny Federasiona malagasy amin’ny fibatana fonjamby avy amin’ny fanjakana mba hanampiana amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, faritra fahatelo,
hotanterahina manomboka anio eny amin’ny kianja mitafon’ Ankorondrano.
“Misaotra ny Filoham-pirenena sy ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena noho ny namalian-dry zareo ny fita­rainana natao. Nanolotra 20 tapitrisa ariary ny minisitera sady mbola nanome 160 tapitrisa ariary ny fitondram-panjakana”, araka ny fanazavan-dRandriamanarivo Harinelina, filohan’ny Federasion’ny fibatana fonjamby, omaly teny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Manana solontena amin’izao hetsika ara-panatanjahantena lehibe izao i Maorisy, Zimbaboe, Botsoana, Kamerona ary Afrika Atsimo.
Atleta efatra ambin’ny folo (fito lahy sy fito vavy) kosa no hiaro ny voninahi-pirenena malagasy. Isan’ny fifaninanana hanangonana isa amin’ny fandraisana anjara amin’ny Lalao Olimpika 2020 ihany koa io fihaonana io, ka tafiditra ao anatin’izany ireo atleta efa manana isa tsara toa an-dRadafiarison Rosina sy Andriantsitohaina mirahalahy.
“Eto amintsika no hotontosaina ny fifaninanana. Hiezaka mafy izahay handrombaka ireo medaly volamena mba tsy ho lasan’ireo atleta mpifanandrina”, araka ny fanazavan’Andriantsitohaina Tojo, kapitenin’ny ekipa nasionaly.
Rugby- Lalao olimpika :: Manomana ny lalao sakana ny Makis vehivavy
Katrok’ady malalaka :: Handray anjara voalohany amin’ny lalao maneran-tany “MMA” ny Malagasy